Infographic: Tilmaame-siinta Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Email-ka ee Soo-dejinta | Martech Zone
Marka emaylladu soo boodaan waxay sababi kartaa khalkhal badan. Waa muhiim inaad gunta ka dhigato - dhakhso!
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan ku bilowno waa inaan fahamno dhammaan walxaha galaya helitaanka emaylkaaga sanduuqa sanduuqa… tan waxaa ku jira nadaafadda xogtaada, sumcaddaada IP, qaabkaaga DNS (SPF iyo DKIM), waxyaabaha aad ka kooban tahay, iyo wixii ka warbixinta emailkaaga sida spam.
Waa kuwan faahfaahin muuqaal ah oo bixinaya aragti guud oo ku saabsan sida emaylku uga socdo abuurista illaa sanduuqa. Waxyaabaha la muujiyey ayaa ah waxa saameynaya suurtagalnimada iimaylkaaga in loo geeyo sanduuqa macaamiisha:
Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Bounce
Si loo hubiyo inaad xallin kartid oo aad ku xallin kartid dhibaatooyinka la soo gudbinta emaylka si dhakhso leh oo hufan, waa kuwan tallaabo toos ah oo hage tallaabo ah oo lagu xallinayo dhibaatooyinka soo kabashada.
Tallaabada 1: Dib u eeg Email-kaaga Diiwaanka Diiwaanka ama Macluumaadka Koodhadhka Bounce
Hubi keydka macluumaadka macmiilka emaylka ee sida ugu badan u soo kabanaya. U fiirso koodhka soo kabashada oo eeg haddii uu ku bilaabmayo 550 koodh bounce. Hadday sidaas tahay, a filter spam waa dhibaatadaada. Weydiinta dadka qaata inay ku daraan cinwaanka emaylka xiriirkooda waxay suurtagal noqon doontaa tan. Haddii aysan suurtagal ahayn, u gudub tallaabada xigta.
Talaabada 2: Hubi SPF-gaaga, DKIM, iyo DMARC Qaabeynta, Dejinta DNS, iyo Xeerarka
Tani waa tallaabadaada xigta haddii aad hesho iyo haddii kale inaad hesho lambar koodh 550 ah. Barnaamijyo kala duwan ayaa la heli karaa si ay kaaga caawiyaan inaad dhammaystirto tallaabadan:
MXToolbox Google Check MX DKIM Ansixiyaha
Marka tallaabooyinkan aan si sax ah loo dejin waxay sababi kartaa dhibaatooyin gudbinta emaylka. Intaa waxaa sii dheer, waad ku xaqiijin kartaa goobahan adoo ka dhex akhrisanaya xogta cinwaanka emaylkaaga - waxay badanaa ku tusayaan inuu asal ahaan ka gudbay jeegagan iyo in kale
Tilaabada 3: Hubi Sumcadaada IP / Dhibcaha Diritaanka
Haddii arrintu sii socoto waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka timaado Magaca cinwaanka IP ama dhibic diraha. Jidka Wadada (oo ay hadda leedahay ansaxnimada) softiweerku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hubiso dhibcaha diraha IP-ga. Haddii dhibcaha aysan iswaafaqin tani waxay ku siin doontaa xoogaa aragti ah sababta dhibaatada. Software-kan ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad aqoonsato siyaabaha lagu hormarin karo horay u socodka.
Tallaabada 4: Hubi in Cinwaankaaga IP-ga uu liis madow ku qoran yahay iyo in kale
Waxaa jira adeegyo dhinac saddexaad ah oo labadaba ISP-yada iyo sariflayaasha isweydaarsiga labaduba ay ansaxiyaan si loo arko haddii ay tahay inay u diraan emaylkaaga sanduuqa macaamiishooda iyo in kale. Spamhaus waa hogaamiyaha warshadan. Haddii aad soo bandhigi kartid raadinta hanti-dhowrka ee aad xiriir ganacsi la leedahay macmiilka kuu soo sheegay SPAM ama diiwaan-gelinta xulashada, waxay caadi ahaan kaa saari doonaan liiska madow.
Tallaabada 5: Hubi Mawduucaaga
Bixiyeyaasha adeegga internetka iyo macaamiisha emailka waxay eegaan ereyada ku jira emaylkaaga si loo aqoonsado suurtagalnimada inay tahay SPAM. Si fudud u sheegida "Bilaash" khadka maadada ama marar badan waxyaabahaaga oo dhan ayaa si toos ah ugu soo diri kara emaylkaaga galka qashinka. Inta badan Bixiyeyaasha Adeegga Emailka ayaa kaa caawin doona inaad dhibco ka dhigto waxyaabahaaga oo aad ka saarto ereyada dhibaato kugu abuuri kara.
Tallaabada 6: La xiriir Adeeg Bixiye Internetka Macaamiisha
Haddii dhibcaha soo diraha uusan aheyn arrinta, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lala xiriiro macmiilka emaylka ee aad ku ogaatay tallaabada ugu horreysa. Arimaha samatabbixintu waxay ku dhici karaan bixiyeyaasha waaweyn sida Gmail, Microsoft, BigPond, iyo Optus. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u aqoonsatay macmiilku inuu yahay cinwaan emayl dowladeed waxaa ugu wanaagsan inaad iska indhatirto arrinta maadaama aysan suurtagal ahayn inaad toos ula xiriirto hay'adda ay khuseyso.
Weydii iimayl bixiyayaasha adeegga macmiilka (Microsoft, Google, Telstra, Optus) si aad u caddeyso cinwaanka IP-ga. Tani waa inay ka hortagtaa dhibaatada inay mar kale dhacdo. Hubso in SPF, DKIM, iyo DMARC ay sax yihiin kahor intaadan laxiriirin adeeg bixiyaasha - tani waxay noqoneysaa su'aashooda koowaad. Waxaad u baahan doontaa inaad caddeyso in tallaabooyinkan si sax ah loo dejiyay ka hor inta aysan waxba ka qaban karin.
FIIRO GAAR AH: Kaydka Qashinka Ayaa Ah Bixinta
Maskaxda ku hay in soo-kabasho macnaheedu yahay in adeegga qaataha uu diidey emaylka oo uu ku soo jawaabey lambarkaas. Emayl la keenayo (250 ok lambar) wali waxaa loo diri karaa a Fakarka Junk… Wax ay tahay inaad wali xalliso. Haddii aad dirayso boqolaal kun… ama malaayiin farriimo, weli waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho aaladda meelaynta sanduuqa si aad u xalliso haddii emaylladaadu tagayaan sanduuqa ama galka qashinka.
Ka shaqaynta talaabooyinkan waa inay awood kuu siisaa inaad xalliso inta badan dhibaatooyinka dirista ehellada dhib la'aan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad dhammaystirtay tallaabooyinkan laakiin ay arrintu weli taagan tahay, caawimaaddii ayaa soo socota - la xiriir kooxdayada si aad u hesho taageero.
Iyada oo ku saleysan tallaabada kor ku xusan ee tilmaamaha tallaabada ah, waxaan ka caawinnay macaamiil badan inay xalliyaan arrimaha u soo gudbinta. Tusaale ahaan, mid ka mid ah bangiyada ganacsiga ee Australia, waxaan raacnay talaabooyinka kor ku xusan si aan kor ugu qaadno keenista 80% ilaa 95% 2 bilood gudahood.
Tags: 250ok550 soo kabasholiiska madowemaylka ka soo kabashoclicksamatabbixindkimDMARCgaarsiinta emaylkaiimayl gaarsiin fure infographickacsan adagsida emailku u shaqeeyocalaamadee sida qashinkaku calaamadee inaanu ahayn qashinsoo sheeg spamSpamhausCiidanka Booliiska Soomaaliyeedcilad bixinta emaylkaUnsubscribe